ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို သတိရလွမ်းဆွတ်ရင်း ဝမ်းနည်းစရာစာလေး ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ နိုင်လူ - TGI Daily News
ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် နိုင်လူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်လူ ဟာ သရုပ်ဆောင် ဦးကြူးမာရဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖခင်ရဲ့အနုပညာအမွေကို ရရှိထားကာ အခုဆိုရင် ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်လူ ကတော့ ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကြူးမာကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း (၈)နှစ်ပြည့်နေ့လေးဖြစ်တာကြောင့် သတိရလွမ်းဆွတ်ရင်း အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေနဲ့လည်း နိုင်လူက “ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဦးကြူးမားသို့မဟုတ်နိုင်လူ၏အဖေကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ယနေ့(၈)နှစ်ပြည့်ရှိလာခဲ့ပြီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာတို့တွင်ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ပရိပ်သတ်၏အားပေး ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့သည့်သရုပ်ဆောင်ဦးကြူးမား(ခ)ဦးစိန်တင့်သည့်
သရုပ်ဆောင်နိုင်လူ၏အဖေဖြစ်သလို့ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာဇာတိဖွား အဖဦးမောင်တင့်အမိဒေါ်အေးစိန်တို့မှမွေးဖွားသည့်မွေးချင်း (၄) ယောက်အနက် တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သည် ငယ်စဉ်မှစ၍ပရဟိတလုပ်ငန်းများလူမှုရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့သလို့မြန်မာနိုင်ငံကြက် ခြေနီအသင်းမှပေးအပ်ခဲ့သည့်အထူးစံပြကြက်ခြေနီတံဆိပ်ကိုရရှိခဲ့ပြီးရှေ့နေဘွဲ့ကိုလည်ရရှိခဲသည် …….
၁၉၉၀နောက်ပိုင်းတွင်ရုပ်ရှင်လောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်း၅၀၀ခန့်တွင့်သရုပ်ဆောင်ပါဂင်ခဲ့ပြီး၂.၁၂.၂၀၁၂တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည် အသက်(၆၄) နှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်….နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာကြာ အဖေသွန်သင်ခဲ့သည့် ဆုံးမစကားများကိုနှလုံးသွင်းရင်း နေ့စဉ်သတိရလျှက်ပါအဖေ
အဖေနှင့်စကားပြောရင်း မိုးလင်းသွားခဲ့သည့်ရက်တွေသတိရလျှက်ပါ အဖေမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်တို့၏ ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ဖော်ပြခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာပါအဖေ နေ့စဉ်ပြုလုပ်သည့်ကောင်းမှုတိုင်းကို အဖေကိုအမျှပေးဝေလျှက်ပါအဖေ ….ရောက်ရှိနေသည်ဘုံဘဝမှ အဖေသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေ လက်နှင့်တောင်ရိုက်ဖို့မရွယ်ဖူးခဲ့သည့် ကျေးဇူးရှင်အဖေ ..အဖေရဲ့သား နိုင်လူ ” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစရာ ရေးသားထားပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Naing Lu
ဇာတျပို့ဇာတျရံ လူကွမျးသရုပျဆောငျ နိုငျလူကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို အပွညျ့အရရှိခဲ့တဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ နိုငျလူ ဟာ သရုပျဆောငျ ဦးကွူးမာရဲ့ သားတဈယောကျဖွဈပွီး ဖခငျရဲ့အနုပညာအမှကေို ရရှိထားကာ အခုဆိုရငျ ဒါရိုကျတာတဈယောကျအနနေဲ့ လုပျကိုငျနတော တှရေ့ပါတယျ။ နိုငျလူ ကတော့ ယနေ့ ဒီဇငျဘာလ ၂ ရကျနမှေ့ာ ဖခငျဖွဈသူ ဦးကွူးမာကှယျလှနျခဲ့ခွငျး (၈)နှဈပွညျ့နလေ့ေးဖွဈတာကွောငျ့ သတိရလှမျးဆှတျရငျး အမှတျတရပုံလေးတှကေို ဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံလေးတှနေဲ့လညျး နိုငျလူက “ရုပျရှငျသရုပျဆောငျဦးကွူးမားသို့မဟုတျနိုငျလူ၏အဖကှေယျလှနျခဲ့သညျ့ ယနေ့(၈)နှဈပွညျ့ရှိလာခဲ့ပွီ ရုပျရှငျဇာတျကားမြားနှငျ့ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာတို့တှငျပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ ပရိပျသတျ၏အားပေး ခဈြခငျမှုကိုရရှိခဲ့သညျ့သရုပျဆောငျဦးကွူးမား(ခ)ဦးစိနျတငျ့သညျ့
သရုပျဆောငျနိုငျလူ၏အဖဖွေဈသလို့ဧရာဝတီတိုငျး လပှတ်တာဇာတိဖှား အဖဦးမောငျတငျ့အမိဒျေါအေးစိနျတို့မှမှေးဖှားသညျ့မှေးခငျြး (၄) ယောကျအနကျ တဈဦးတညျးသောသားဖွဈသညျ ငယျစဉျမှစ၍ပရဟိတလုပျငနျးမြားလူမှုရေးလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျခဲ့သလို့မွနျမာနိုငျငံကွကျ ခွနေီအသငျးမှပေးအပျခဲ့သညျ့အထူးစံပွကွကျခွနေီတံဆိပျကိုရရှိခဲ့ပွီးရှနေ့ဘှေဲ့ကိုလညျရရှိခဲသညျ …….
၁၉၉၀နောကျပိုငျးတှငျရုပျရှငျလောကသို့ဝငျရောကျခဲ့ပွီးဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျး၅၀၀ခနျ့တှငျ့သရုပျဆောငျပါဂငျခဲ့ပွီး၂.၁၂.၂၀၁၂တှငျကှယျလှနျခဲ့သညျ အသကျ(၆၄) နှဈတှငျကှယျလှနျခဲ့သညျ….နှဈပေါငျးဘယျလောကျကွာကွာ အဖသှေနျသငျခဲ့သညျ့ ဆုံးမစကားမြားကိုနှလုံးသှငျးရငျး နစေ့ဉျသတိရလြှကျပါအဖေ
အဖနှေငျ့စကားပွောရငျး မိုးလငျးသှားခဲ့သညျ့ရကျတှသေတိရလြှကျပါ အဖမေိဘဆရာသမားကြေးဇူးရှငျတို့၏ ကြေးဇူးတရားကို သိတတျဖျောပွခွငျးသညျလညျး မင်ျဂလာပါအဖေ နစေ့ဉျပွုလုပျသညျ့ကောငျးမှုတိုငျးကို အဖကေိုအမြှပေးဝလြှေကျပါအဖေ ….ရောကျရှိနသေညျဘုံဘဝမှ အဖသောဓုချေါဆိုနိုငျပါစေ လကျနှငျ့တောငျရိုကျဖို့မရှယျဖူးခဲ့သညျ့ ကြေးဇူးရှငျအဖေ ..အဖရေဲ့သား နိုငျလူ ” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစရာ ရေးသားထားပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Naing Lu
အပြင်ထွက်ရလို့ ပျော်မဆုံးဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလျှောက်ကြည့်ကာ သဘောတွေကျနေတဲ့ သားသားလေးကို မွှေးမွှေးပေးနေတဲ့ မေမေပိုးအိအိခန့်
ပုံတူပန်းချီရေးဆွဲထားတဲ့ မီးပုံပျံကြီးတွေလွှတ်တင်ပြီး ဂုဏ်ပြုခံလိုက်ရလို့ ဦးကျော်သူ
အဝေးမှာ ပညာရှာနေတဲ့ မြေးမလေး ဝင်းဝါပန်းမြတ်သူရဲ့ အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် မေတ္တာတွေများစွာနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေ